نشيد الأنشاد 1 NAV – Nnwom Mu Dwom 1 ASCB | Biblica
نشيد الأنشاد 1 NAV – Nnwom Mu Dwom 1 ASCB
2Ma ɔmfa nʼano mfeano no mfe mʼano,
ɛfiri sɛ wo dɔ no yɛ ahomeka sene bobesa.
3Wʼaduhwam yi hwa a ɛyɛ ahomeka
wo din te sɛ aduhwam a wɔahwie.
Na ɛnyɛ nwanwa sɛ mmabaawa no dɔ woɔ!
Ma ɔhene mfa me nkɔ ne piam.
Yɛbɛdi ahurisie na yɛn ani agye wo ho.
Yɛbɛkamfo wo dɔ asene bobesa.
5Mebiri deɛ, nanso me ho yɛ fɛ,
Ao, Yerusalem mmammaa,
mobiri te sɛ Kedar ntomadan,
te sɛ, Salomo ntomadan mu ntwamutam!
6Nhwɛ me haa sɛ mebirie enti,
ɛfiri sɛ awia na ayɛ me saa.
Memaa mmammarima bo fuu me
enti wɔmaa me kɔhwɛɛ bobe nturo so;
na amma manhwɛ mʼankasa me bobe turo.
7Kyerɛ me me dɔfoɔ,
faako a wode wo nnwankuo kɔ adidi
na owigyinaeɛ nso faako a woma wo nnwan home.
Adɛn enti na ɛsɛ sɛ meyɛ sɛ ɔbaa a wakata nʼanim
wɔ wo nnamfonom nnwankuo ho?
8Sɛ wonnim a, mmaa ahoɔfɛfoɔ pa ara no,
fa ɛkwan a nnwan fa soɔ so
na fa wo mpapo mma kɔ adidi
wɔ nnwanhwɛfoɔ no ntomadan ho.
9Me dɔfoɔ, mede wo toto pɔnkɔ bereɛ
a wɔde ahoma asa no wɔ Farao nteaseɛnam baako ho.
10Nsomuadeɛ ama wʼafono ho ayɛ fɛ,
11Yɛbɛyɛ sikakɔkɔɔ nsomuadeɛ
12Ɛberɛ a ɔhene te nʼadidi ɛpono ho no,
nʼaduhwam hwa no gyee hɔ.
13Me dɔfoɔ ayɛ me sɛ kurobo1.13 Krobo yɛ aduhwam bi a wɔnya firi “balsam” dua a ebi wɔ Etiopia, Ntam Po ne India. Nnipa de yɛ wɔn ho ma wɔn ho yɛ hwam. toa
14Me dɔfoɔ ayɛ me sɛ nhwiren boa a ayɛ frɔmm
wɔ En-Gedi1.14 En-Gedi yɛ kwaeɛ a ɛwɔ ɛserɛ so wɔ Nkyene Po atɔeɛ fam a afifideɛ a ɛyɛ hwam bebree wɔ. bobe turo mu.
15Me dɔfoɔ, wo ho yɛ fɛ!
Ao, ahoɔfɛ nie
wʼaniwa aba te sɛ aborɔnoma.
16Me dɔfoɔ, wo ho yɛ fɛ!
yɛn mpa so yɛ akɔnɔakɔnɔ.
17Yɛn fie mpunan yɛ ntweneduro;
yɛn nsamsoɔ yɛ pepeaa.
ASCB : Nnwom Mu Dwom 1